च्याम्पियन्स लीग : टोटनह्याम र आयाक्स भिड्दै - फ्रन्टलाईन नेपाल
१७ बैशाख २०७६, मंगलवार ११:२० April 30, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
काठमाडौं, १७ वैशाख । यूरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलका खेल मंगलबारदेखि शुरु हुँदैछ । आज हुने पहिलो सेमिफाइनल लेगमा टोटनह्याम हट्सपर र आयाक्स भिड्दै छन्। खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १ बजे टोटनह्यामको घरेलु मैदानमा हुनेछ ।
यी दुई टोलीबीच ३८ वर्ष पछि खेल हुन लागेको हो। पछिल्लो पटक यी टिमले सन् १९८१को २९ सेप्टेम्बरमा यूएफा युरोपियन कप विनर्समा भिडेका थिए। जसमा आयाक्स टोटनह्यामसंग ३-० ले पराजित भएको थियो ।
जर्मनीको बोरुसिया डर्टमन्डलाई प्रि क्वार्टरफाइनलमा पराजित गर्दै क्वाटर फाइनल प्रवेश गरेको टोटनह्यामले क्वाटरफाइनलमा भने म्यानचेस्टर सिटीलाई स्तब्ध पार्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाउन सफल भयो। त्यस्तै स्पेनको रियल मिड्रड र इटलीको युभेन्टसलाई हराउँदै आयाक्सले सेमीफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो।
Tagged champions league, footballl, ucl
१४ चैत्र २०७५, बिहीबार १३:२२ March 28, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
चैत १४ , काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वबिद्यालयले बीबीएस दोस्रो वर्षको नतिजा आज प्रकाशन गरेको छ । श्रावण महिनामा संचालित परीक्षाको नतिजा आज सार्बजनिक गरिएको हो । नतिजामा २५.८४ प्रतिशत बिद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षामा कुल ६८ हजार ८ हजार ७८ बिद्यार्थी सम्मेलित भएका थिए । नतिजा tu.edusanjal.com मा हेर्न सकिने छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो भन्छन् : “मलाई अब केही प्रमाणित गर्नुछैन।”
१४ पुष २०७६, सोमबार १२:१४ December 30, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
एजेन्सी । इटालियन क्लब युभेन्ट्सका स्टारफरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफू अब केही प्रमाणित गर्न बाँकी नरहेको बताएका छन् । आफूले जितेको कुराहरुमा आफू खुसी रहेको भन्दै रोनाल्डोले उक्त कुरा बताएका हुन् । ग्लोबर सकर अवार्डमा बोल्दै रोनाल्डोले भने ‘त्यहाँ कुनै रहस्य वा चमत्कार छैन । म जहाँ पुगेको छु त्यहाँ उपाधि जित्नु कुनै संयोग होइन । […]
सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट मिश्रबिच खास के संवाद भएको थियो ?
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १७:०८ February 20, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं । ८ फागुन । ७० करोड रुपैंया घुस मागेको आरोपमा बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । आखिर मन्त्री बाँस्कोटा र स्विस कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र शर्मासँग खास के कुरा भएको थियो ? विजय प्रकाश मिश्र शर्माः यो १२ गते १२ बजेपछि स्वीस एम्वेसी आउँछ। स्वीस एम्वेसीले बोलाएर […]
इन्स्टाग्राम पोष्टले यस्तो बबाल